OpenTitan, mashruuca isha furan ee Google si loo abuuro jajabyo aamin ah | Laga soo bilaabo Linux
Dhawaan warka ayaa faafay in Google ay iskaashi la yeelatay dhowr shirkadood farsamada si loo horumariyo jajabka ilaha aaminka ah iyo kuwa furan. Ujeedada isbahaysiga cusub waa in la abuuro naqshado jilicsan ku adag adeegsiga xarumaha xogta, server-yada iyo qalabka durugsan ee lagu rakibay goobaha muhiimka ah.
Mashruuca waxaa lagu magacaabaa OpenTitan, hindise il furan oo loogu talagalay si loo dhiirrigeliyo horumarinta waxa loogu yeero tikniyoolajiyadda xididka-kalsoonida xarumaha xogta iyo aaladaha macaamiisha. Shirkaddu waxay ku talo jirtaa inay u adeegsato taleefannada gacanta ee ku shaqeeya Android, iyo sidoo kale aaladaha kala duwan ee amniga qalabka.
Google ayaa sidaa tidhi OpenTitan waxaa maamuli doona bulshada LowRisc. Wada-hawlgalayaasha waxaa ka mid ah ETH Zurich, G + D Mobile Security, Nuvoton Technology, iyo Western Digital.
Isla mar ahaantaana, Awoodda la qabsiga OpenTitan ku dhowaad qalab kasta ama softiweer ayaa la sheegtaa. Marka nidaam lagu sifeeyo inuu leeyahay xidid aamin, waxay ka dhigan tahay inuu jiro qashin khaas ah ama qayb mas'uul ka ah ka hortagga isku dayga jabsiga.
Taleefankii horeGoogle Pixel 4, tusaale ahaan, Titan M microcontroller ayaa doorkaas ciyaara. Waa processor yar oo xaqiijiya hufnaanta firmware-ka ku jira taleefannada isticmaalaha mar kasta oo ay daaraan.
Dhanka kale, xarumaha xogta, asalka kalsoonida badanaa waa waxa loo yaqaan aaladda amniga qalabka, qalab u heellan oo 'ilaaliya' furayaasha sirta kaas oo ay server-yadu kuqariyaan xog sir ah. Qeybaha amniga qalabka ayaa ka go'doonsan shabakada inteeda kale badiyaaana waxay ku yimaadaan kiis fadeexad u adkaysta.
Iyadoo loo marayo OpenTitan, Google waxay rajeyneysaa inay siiso warshadaha halbeegyo teknolojiyad wadaag ah oo loogu talagalay abuurista aalado xidid lagu kalsoon yahay.
Raadinta weyn ayaa hadda horumarinaya naqshad chip si gaar ah loogu talagalay loogu talagalay mashruuca iyadoo la adeegsanayo dhismaha caanka ah ee RISC-V. Waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo ka mid ah shaqooyinka sidoo kale, oo ay ku jiraan qalabka, kumbuyuutarrada loo hagaajiyay inay qabtaan howlaha cryptographic, iyo matoor lambar nambar ah oo loogu talagalay abuurista furayaasha sirta.
«Chips-yada furan waxay hagaajin karaan kalsoonida iyo amniga iyada oo loo marayo naqshadeynta iyo daahfurnaanta fulinta »
Dhibaatooyinka goor hore ayaa la ogaan karaa waxaana yaraaday baahida loo qabo kalsooni la'aanta indhaha. Waxay intaa ku dareen in si xor ah loo wadaago tikniyoolajiyadaha asaasiga ah ay "awood u yeelan karaan isla markaana kobcin karaan hal-abuurnimada iyada oo loo marayo tabarucaad ku aaddan naqshadda ilaha furan." Qoray Royal Hansen, Sarkaalka amniga u qaabilsan macluumaadka Google iyo hogaamiyaha OpenTitan Dominic Rizzo oo ku soo qoray barta internetka.
Google wuxuu si firfircoon uga shaqeynayaa inuu soo jiito nidaamka deegaanka ee dadka wax ku biiriya. Shirkaddu waxay ku wareejisay maamulka OpenTitan shirkadda LowRisc, oo ah hay'ad warshadeed oo xiriir la leh Jaamacadda Cambridgey ayaa qoraneysa wada-hawlgalayaal dibadeed si ay u taageeraan horumarka.
Hansen iyo Rizzo ayaa qoray taas farsamada laga soo saaray OpenTitan ayaa noqon doonta
"Waxay waxtar u leedahay soo-saareyaasha amniga ee miyir-qabka ah, bixiyeyaasha barnaamijyada, iyo ururada ganacsiga ee doonaya inay kor u qaadaan kaabayaashooda."
Tiknoolajiyad kasta oo ay ururadu gacan ka geystaan ​​OpenTitan waxay u noqon kartaa mid waxtar u leh Google. Shirkaddu waxay u isticmaashaa guntin xididdo lagu kalsoon yahay taleefannadeeda Pixel, kiniiniyada Pixel Slate, iyo tan ugu muhiimsan, xarumaha xogteeda si looga ilaaliyo server-yada weerarada.
Ballanqaadka Chips-ka wax ku oolka ah ayaa xitaa laga yaabaa inay isku dayaan qaar ka mid ah kuwa la tartamaya Google ku biirista OpenTitan.
Apple Inc. tusaale ahaan waxay leedahay processor-keeda lagu kalsoon yahay ee loo yaqaan 'T2' oo leh noocyo Mac ah, halka Amazon Web Services Inc. ay bixiso adeegyo moduleka amniga ah iyada oo loo marayo dariiqa dariiqa.
Dhinaceeda, iyadoo ka faa'iideysaneysa booskeeda kaabayaasha xogta iyo tikniyoolajiyadda il furan, Western Digital waxay la shaqeyneysaa la-hawlgalayaasha nidaamka deegaanka si loo wanaajiyo qaab-dhismeedka OpenTitan si loo daboolo baahiyaha amniga ee kaladuwan ee kiisaska isticmaalka kaydinta xogta udub dhexaadka u ah, oo ay ku jiraan codsiyada barashada mashiinka, taleefannada casriga ah, iyo aaladaha isku xiran ee Internetka ee Waxyaabaha (IoT).
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan, xiriirkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » OpenTitan, mashruuca isha furan ee Google si loo abuuro jajabyo aamin ah
Mid ka mid ah yoolalka ugu waaweyn ee Google ee mashruucan ayaa ah in la soo saaro jajabyo "jir ahaan" ka hortagaya wax ka beddelka barnaamijyada lagu rakibay taleefanka ama in dadku ay ku rakibi karaan shirkado gaar ah oo ay iska leeyihiin ama roms.
Chips-yada furan waa fikrad aad u fiican oo wax badan u tari kara bulshada, laakiin yaanan lagu kadsoomin ruuxa weyn iyo ujeedkiisa.
PostgREST, oo ah 'REST API' wixii xog-ururin PostgreSQL ah oo lagu qoray Haskell